> Resource > Video > gubay DVD ayaan ciyaari doonin DVD Player? Xalliyo.
Ma idinku dhibeen by sababta gubay DVD ma ciyaari doono in DVD ciyaaryahanka, laakiin si aad u wanaagsan kombiyuutarka ciyaari karaa? Waan ogahay sababta saxda ah, sababtaas soo gaarto dad badan oo dhibaato la mid ah. Sababta waa software DVD gubashadii aad isticmaasho ma gubi DVD ah ee qaabka DVD video midig. Laga yaabaa in DVD xogta ah inaad gubtaan, oo aad videos. Ku dhowaad dhammaan ciyaartoyda DVD ma garan karaan macluumaadka DVD-yada, laakiin DVD kaliya video. Sidoo kale, waxaa jira qaabab badan oo DVD video kala duwan, sida DVD-R, DVD + R, DVD-RW, DVD + RW, DVD-R DL, DVD + R DL, iwm ciyaartoyda DVD kala duwan ayaa Details qaab DVD iyaga u gaar ah . Malaha, DVD ciyaaryahan aysan ciyaari doonaa DVD gubo sababtoo ah incompatibility.
Si loo xalliyo dhibaatada, waxa aad u baahan tahay in la isku dayo software DVD gubashadii kale. Halkan, si adag ayaan ku talin Wondershare DVD Creator ( DVD Creator for Mac ), sida barnaamijkan awood badan taageertaa wax qaabab DVD disc recordable oo caan ah, oo ay ku jiraan DVD-5 iyo DVD-9 (DVD-R, DVD + R, DVD-RW, DVD + RW, DVD + R DL, DVD-R DL, DVD-RAM). Just geliso disc maran DVD DVD in ciyaaryahan aad taageertaa, oo markaas u isticmaalaan qalab this DVD gubashadii si sahlan loo isticmaalo in ay si deg deg ah ku gubtaan. Geedi socodka oo dhan waa kaliya afar tallaabo oo fudud.
1 dejinta asalka video files
Waxaad sidoo kale riixi kartaa batoonka wareega buluug sare ee interface ugu weyn ka dibna dooro Add Faylal ay doorasho ama si fudud ku dhufatey + Import badhanka si ay u dajiyaan videos aad rabto in aad ku gubi. Ka dib markii in, dhammaan faylasha daray waxaa lagu muujiyey in barnaamijkan ee Murayaad bidix. Wakhtigan, haddii u baahan, waxaad riixi kartaa "↑", "↓" fursad u habayn iyo si loo maqli ah. Oo weliba, waxaad riixi kartaa + dar horyaalka doorasho hoose in aad habayso videos fiican.
2 Dooro DVD menu iyo edit videos (Ikhtiyaar)
Haddii u baahan tahay, waxaad riixi kartaa Edit button on bar video shayga inuu sameeyo qaar ka mid ah shaqooyinka video tafatirka.
Dooro mid ka mid ah arrimo DVD menu jecel DVD aad.
Si loo hubiyo saamayn ugu dambeeya, waxaad u baahan tahay in aad ku eegaan masterpiece in waqtiga dhabta ah.
3 Guba DVD ah in aad taageero DVD ciyaaryahan
Ka hor inta aadan gubi DVD ah DVD ciyaaryahan aad, aad u baahan tahay si aad u ogaato wixii qaab DVD DVD ku taageertaa. Halkan, waxaan qaadi DVD + R tusaale ahaan. Oo awoodda kaydinta DVD, waxaad dooran kartaa maran DVD-9 (8.5GB) haddii baaxadda faylasha daray waa ka badan 4.7GB (DVD-5).
Ka dib marka aad is geliso DVD + R disc maran, waxaad u baahan tahay in ay sax "Guba si cajalid" doorasho ku jira "Guba" interface, ka dibna riix "Guba" badhanka si ay u bilaabaan DVD ku gubanayso. Dhowr daqiiqo ka dib, DVD disc qoraal si toos ah saaray doonaa. Hadda, kaliya aad ku raaxaysan on DVD ciyaaryahan aad.
Gubay DVD ma ciyaari doono in DVD ciyaaryahanka? Ka fiirso halkan sameeyo. Marnaba murugoon doonaa Waxaad ay dhibaatadan mar kale.